Waa maxay Uhuura Keyatta iyo Railla Odinga heshiis horudhac ah ay gaareen? – idalenews.com
Waa maxay Uhuura Keyatta iyo Railla Odinga heshiis horudhac ah ay gaareen?
Madaxwaynaha Dalka Kenya Uhuru Kenyatta, iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa kulan ku yeeshay Magaalada Nairobi ee caasimada Dalka Kenya, kaas oo qorshihiisa iyo ahaa sidii ay qorshe mid ah ugu wada qaadan lahaayeen xurgufta siysaadaeed ee ka dhex taagan labada dhinac.
Kulankan oo shalay ka dhacay xarunta Harambee House ee Magaaalada Nairobi ayay si wada jir ah isula meel dhigeen sida ugu wanaagsan ee loo curin kara horumar siyaasadeed, iyadoo meel layska dhigayo murankii soo kala dhex galay Labada hoggaamiye.
Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ayaa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay ka dib markii ay yeesheen kulankoodii ugu horreeyay tan iyo doorashadii ka dhacday Kenya, iyadoo uu weli hoggaamiyaha mucaaradku carrabka ku ballaadhin inuu Uhuru yahay hoggaamiyaha Dalka.
Railla Odinga ayaa horraantii Sanadkan isu dhaariyay madaxwaynaha Dalka Kenya, isagoo meesha ka saaray inuu Uhuru Kenyatta, uu ku guulaystay doorashii dhacday.
Labada hoggaamiye ayaa waxay horay ugu gacan sayreen inay kulmaan,waxaase lagu wadaa in isku soo dhawaashiyahani uu gadaal ka riixayo Maraykanka oo galangal badan ku leh Dalka Kenya.
Dhinaca kale Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa lagu wadaa in uu Maanta booqasho ku tago caasimadda Kenya ee Nairobi, iyadoo lagu wado inuu dhammaystiro wada hadalkan horudhaca ah.
Mr Kenyatta ayaa yiri: “waxa aan billaabaynaa geedi socod aan uga wadaxaajoonayno halka ay dhibaatada naga haysato iyo waxa nakala qaybinaya, halka uu Railla Odingana sheegay in la joogo waqtigii la xalin lahaa farqiga u dhexeeya labada dhinac.
War Xasaasi ah:Cabdi Xaashi oo ka digay in Wadahadalka Somalia & S/land loo adeegsado dano dhaqaalo iyo mid qabiil..